Taylor Swift ရဲ့ ၂၀၁၈ အတွက် အသစ်စက်စက် Music Video “End Game” ထွက်ပြီ - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Taylor Swift ရဲ့ ၂၀၁၈ အတွက် အသစ်စက်စက် Music Video “End Game” ထွက်ပြီ
14 Jan 2018 . 1:38 PM
Taylor Swift ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံး Music Video ထွက်ရှိလာပြီး ဒီတစ်ခါလည်း ထင်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ့်ကို အမိုက်စားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းကတော့၂၀၁၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအခွေ “Reputation” မှာပါတဲ့ Rapper Future နဲ့ Ed Sheeran တို့သီဆိုတဲ့ “End Game” သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုကို တိုကျို၊ မီယာမီနဲ့ လန်ဒန်မြို့တို့မှာ ရိုက်ကူးထားပြီး သူ့ရဲ့ Social Media App ဖြစ်တဲ့ The Swift Life မှာ အမြည်းအနေနဲ့ ဦးဆုံးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗွီဒီယိုကို Taylor Swift နဲ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ကိုင်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ Joseph Kahn ကပဲ ရိုက်ကူးပေးထားပြီး Joseph ရဲ့ လက်ရာတွေထဲမှာ “Blank Space” နဲ့ “Look What You Made Me Do” တို့လို နာမည်ကြီး Music Video တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီ “End Game” သီချင်းဟာ YouTube ကို တင်တာ ခုမှ နှစ်နာရီကျော်ကျော်သာ ရှိသေးပေမယ့် ကြည့်ရှုသူ 481K ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Taylor Swift ရဲ့ Music Video ဆိုတာ အမိုက်စားတွေဆိုတဲ့အတိုင်း ခုပဲ ကြည့်သင့်ပါပြီ။
Taylor Swift ရဲ့ ၂၀၁၈ အတှကျ အသဈစကျစကျ Music Video “End Game” ထှကျပွီ
Taylor Swift ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ ပထမဆုံး Music Video ထှကျရှိလာပွီး ဒီတဈခါလညျး ထငျထားတဲ့အတိုငျးတကယျ့ကို အမိုကျစားပဲ ဖွဈပါတယျ။
သီခငျြးကတော့၂၀၁၇ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးအခှေ “Reputation” မှာပါတဲ့ Rapper Future နဲ့ Ed Sheeran တို့သီဆိုတဲ့ “End Game” သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ ဒီဗှီဒီယိုကို တိုကြို၊ မီယာမီနဲ့ လနျဒနျမွို့တို့မှာ ရိုကျကူးထားပွီး သူ့ရဲ့ Social Media App ဖွဈတဲ့ The Swift Life မှာ အမွညျးအနနေဲ့ ဦးဆုံးတငျပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီဗှီဒီယိုကို Taylor Swift နဲ့ လကျတှဲအလုပျလုပျကိုငျတာ ကွာပွီဖွဈတဲ့ Joseph Kahn ကပဲ ရိုကျကူးပေးထားပွီး Joseph ရဲ့ လကျရာတှထေဲမှာ “Blank Space” နဲ့ “Look What You Made Me Do” တို့လို နာမညျကွီး Music Video တှေ ပါဝငျပါတယျ။
ဒီ “End Game” သီခငျြးဟာ YouTube ကို တငျတာ ခုမှ နှဈနာရီကြျောကြျောသာ ရှိသေးပမေယျ့ ကွညျ့ရှုသူ 481K ရှိပွီဖွဈတဲ့အတှကျ Taylor Swift ရဲ့ Music Video ဆိုတာ အမိုကျစားတှဆေိုတဲ့အတိုငျး ခုပဲ ကွညျ့သငျ့ပါပွီ။
by yoelu .4weeks ago
by Kyaw Soe Aung .4weeks ago